တရုတ်တက်စီများ China Taxi | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » တရုတ်တက်စီများ China Taxi
တရုတ်တက်စီများ China Taxi
Posted by weiwei on Dec 20, 2010 in Events/Fundraise, Society & Lifestyle, Travel |7comments
wei's experience တရုတ်တက်စီများ
ဒီနေ့ အပြင်သွားတော့ တက်စီစီးဖြစ်တယ်။ ခါတိုင်းအပြင်ထွက်ရင် မလိုအပ်ပဲ စကားသိပ်ပြောလေ့မရှိပေမယ့် ဒီနေ့တော့ စပ်စုချင်တာနဲ့ ခရီးကလဲဝေးတာနဲ့ ကားဆရာကလဲ သဘောကောင်းပုံပေါ်တာနဲ့ စကားလက်ဆုံကျသွားမိပါတယ်။ ဗဟုသုတရအောင် ပြန်လည်ဝေငှပေးလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာတော့ တက်စီကို တာတီးလို့ အလွယ်ခေါ်ပါတယ်။ တက်စီတွေမှာ ကုမ္ပဏီတံဆိပ်တွေပါပါတယ်။ ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်ပြီး တက်စီရဲ့အရောင်တွေကွာပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က တက်စီမောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်ရင် တက်စီတစ်စီးဝယ်ပြီး ကုမ္ပဏီမှာစာရင်းပေးပြီး အခွန်ဆောင်ရပါတယ်။ ကားက ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ရပေမယ့် ကုမ္ပဏီနံမည်နဲ့မှ လိုင်စင်က အဆင်ပြေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကားတစ်စီးရဲ့သက်တမ်းကိုလဲ ၁၀ နှစ်အထိပဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ၁၀ နှစ်ပြည့်ရင် ကားအသစ်နဲ့ အလိုက်ပေးပြီး ပြန်လဲရပါတယ်။ တက်စီအများစုက သစ်လွင်တောက်ပနေပါတယ်။ ထိုင်ခုံတွေကို ပိတ်အဖြူရောင်အစွပ်တွေနဲ့ စွပ်ထားကြရတယ်။
ကားတွေက လူမပါပဲသွားနေရင် ကားရှေ့မှာ အနီရောင်စာတမ်းလေးနဲ့ ကားအလွတ်လို့ ရေးထားပြီး အဝေးကနေမြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကားဆိုရင် လှမ်းတားလိုက်လို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် ကားပေါ်တက်ပြီး ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို ပြောပြလိုက်ရုံပါပဲ။ သူ့ဟာသူမီတာမှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအကျင့်နဲ့ ကျွန်မရန်ကုန်ရောက်တုန်းက ခံလိုက်ရဖူးသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က လှည်းတန်းဈေးရှေ့နားကနေ UFL ကို တက်စီငှားစီးမိတယ်။ မေ့ပြီး ဈေးမမေးမိပါဘူး။ ဟိုလဲရောက်ရော ဘယ်လောက်လဲမေးတော့မှ ၂၀၀၀ ကျပ်တဲ့။ စီးပြီးမှတော့ ဘာမှလုပ်မရတော့ပဲ ပေးလိုက်ရဖူးတယ်။
ကားရဲ့မီတာက ဘီးလှိမ့်ရဲ့အပတ်ရေရယ် ကြာတဲ့အချိန်ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး မီတာတက်နေပါတယ်။ မီတာက ခရီးတစ်မီတာကို 1.2 ယွမ်၊ ခရီးအတူတူပေမယ့် ရုံးတက် ရုံးဆင်းချိန် ကားတွေပိတ်ချိန်မှာ ပိုက်ဆံပိုကျလေ့ရှိပါတယ်။ ကားတွေအများစုက ဓါတ်ဆီနဲ့ ဂက်စ် နှစ်မျိုးသုံးတဲ့ အင်ဂျင်တွေနဲ့ … ဓါတ်ဆီဈေးတက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဂက်စ်နဲ့သုံးပေမယ့် ဓါတ်ဆီနဲ့လဲ မောင်းလို့ရပါတယ်။ တရုတ်စကားမပြောတတ်ရင်လဲ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို စာရွက်မှာရေးထားပြီး ပြလိုက်ရုံပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေလဲ တက်စီမောင်းနေကြပါတယ်။
တက်စီကားတွေမှာ ရေဒီယိုတစ်ခုကနေ တစ်နေကုန်အသံလွှင့်နေတဲ့ တစ်မြို့လုံးရဲ့ လမ်းခရီးသတင်းရှိပါတယ်။ ဘယ်လမ်းမှာရေကြီးတယ် ဘယ်လမ်းမှာကားကြပ်နေတယ် ဘယ်ကားမှာ ဘာပစ္စည်းခရီးသည်ကမေ့ကျန်ခဲ့တယ် စသဖြင့် အချိန်နဲ့တပြေးညီ အသံလွှင့်နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကားအချင်းချင်းလဲ ဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ထားကြပါသေးတယ်။ ကားမောင်းသမားတွေ စည်းကမ်းသိပ်မရှိကြပေမယ့် အလွန်စိတ်ရှည်ပြီး ကျွမ်းကျင်ကြလို့ ကားအက်ဆီးဒင့် အလွန်အလွန်နဲသောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ….
၁၉၉၂ ခုနှစ်က အိန္ဒိယကို ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ် .. အဲဒီမှာလဲ တက်ဆီတွေ မီတာချိုးရပါတယ် .. တက်ဆီမှာ စာကပ်ထားတယ် .. ယနေ့ ဆီပေါက်ဈေးကြောင့် လက်ရှိ မီတာကို ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်း နှင့် မြှောက်ပေးပါ တဲ့ .. နောက်ပြီး ည ၇ နာရီ ဆိုရင် လက်ရှိ မီတာကို နှစ်ဆ ပေးပါ တဲ့ .. ဘာလို့ ဆို သူတို့မှာလဲ အစည်းအရုံး ရှိတယ် .. ခပ်တည်တည်နဲ့ စီး .. ပြီးလို့ ဆင်းရမယ့် နေရာရောက်ရင် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးပြီး ပြန်ကြည့်လိုက် .. ပိုငွေ ပြန်မအမ်းပဲ မနေဘူး .. အဲဒီလို ရှိခဲ့တယ် ..
ရန်ကုန်မှာ မီတာတပ် သုံးဘီးတွေလဲ ရှိခဲ့တာပဲ .. အဲဒီတုန်းကလဲ ဒီလိုပဲ ပိုငွေ ပြန်အမ်းပါတယ် ..
အခုတော့ .. မီတာက မီတာ .. ကားပေါ် မတက်ခင် ဈေးပြန်မေးရတာက အလုပ်တစ်ခုပါ ..
နောက်ပြီး အက်ဖ်အမ်က စထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလို မြို့တွင်းအခြေအနေ .. ကားပိတ်ဆို့မှု .. မီးလောင်မှု .. ရေကြီးမှုတွေ ပြောမယ် လို့ အသံကောင်း လွှင့်ခဲ့ပါတယ် .. အခုတော့ ကြော်ငြာက ရတဲ့ ပိုက်ဆံနောက် လိုက်နေလို့ .. ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါ
မြန်မာပြည်က တက္ကစီ တွေကတော့ ညစ်ပတ်တယ်၊ လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ ဒီကြားထဲလူပိုတင်ချင်သေးတယ်။
မိန်းမတွေ တက္ကဆီမောင်းတာတော့ တရုပ်ပြည်မှာပဲတွေ့ဖူးတယ်။
မြန်မာတွေလုပ်ရင် ဘယ်တုန်းကတိကျဖူးလို့လဲ ? အားနာတာရယ် မျက်နှာလိုက်တာရယ် ကြောက်ရလို့ရယ် အမြင်ကပ်လို့ရယ် နဲ့ ဘယ်တော့မှတိတိကျကျ မလုပ်ဖူး။ အဲတစ်ခုတော့ရှိတယ် ပိုက်ဆံရမှာ ဆိုရင်တော့ အတိအကျပဲ ပေးစရာရှိရင်တော့ ငါးကျပိတစ်ဆယ် ဈေးခွာဆစ်နေပြီ
ရန်ကုန်မှာတော့ တက္ကစီတိုင်းမှာ မီတာရှိတယ် ပြန်မေးရတယ် ဘယ်လောက်လဲ ဈေး ဆစ် သင့်ရင် ဆစ်ရတာပေါ့။ စစ တက်ချင်း ၅၀၀ ကျပ်နဲ့ စပါတယ်။ ဟိုနား ဒီနား သွားရင် မီတာနဲ့က ပိုကုန်တယ် လို့ ထင်မိတယ်။ အခုထိတော့ တိကျတဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ သေချာ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ တက္ကစီတွေပေါ် တက်လိုက်ရင် တခါတလေ ထိုင်နေတဲ့ နောက်တွဲကြီး ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့လေ မလား ထင်ရတယ်။ တော်တော် ကို စုပ်ပါတယ်။ တက္ကစီ သမားတွေလည်း သနားဖို့တော့ ကောင်းတယ် ကားက သိပ်မကောင်းလည်း အုံနာကြေး ကြေအောင် ရှာရတယ်။ အုံနာကြေးနဲ့ ဆီဖိုး အရင် ရှာပြီးမှ မိသားစုနဲ့ သားသမီးတွေ အတွက် ကြိုးစားရတယ်။ ကားပျက်ရင်လည်း အုံနာ က ပိုက်ဆံ ၅၀% တချို့က ကိုယ့်ဟာကို ပြင် ဆိုပြီး ကတိက၀တ်နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတာ ဆိုတော့ နောက်ဆုံး သုံးမရတဲ့ အဆုံးမှ ကားပြင် သို့မဟုတ် ကားပိုင်ရှင်ထံ အပ်နှံပြီး နောက်တစီး ရှာကြရတယ်။ အငှားကား မောင်းသူတွေဆို.. မိုးတွင်း ဘက်ဆို မိုးကရွာ ရေကကြီးနဲ့.. (ကားစုပ်ရင် ရေကြီးတဲ့ နေရာ သွားလို့ အဆင်မပြေဘူး ကားပြင်စရိတ်ထောင်းမှ စိုးရိမ်ရလို့) သိပ်အဆင်မပြေလို့.. မိသားစု အတွက် တော်တော် ကြိုးပမ်းရတယ်။ ကား မောင်းချင်ရင် ပိုင်ရှင်ထံ သိန်း ၂၀ စပေါ တင်ရတယ်။ ကားပြင်ခါနီး ပိုက်ဆံ မရှိရင် စပေါထဲက ဖြတ်တဲ့ အုံနာနဲ့ တွေ့ရင် နောက်ဆုံး စပေါ သေးသွားပြီး ကားသာဆွဲပြီး သိန်း ၂၀ ပျောက်သွားတဲ့ လူတွေ လည်း ရှိတယ်။
ယူအက်စ်မှာတော့ မြန်မာ တက်စီဆရာတွေ အများကြီးပဲ.။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ .. မြန်မာတက်စီဆ၇ာ .. အသင်းအဖွဲ့ တွေတောင်ရှိတယ်..။ မြန်မာပြည်ကိုလည်းကူနေကြတယ်..။
အဲဒါ .. အခု ညာဖက် Ad. အနေနဲ့ပေါ်နေတာလည်း မြန်မာတက်စီဆရာရဲ့ ကြော်ငြာပဲ..။
ဒီနှစ်ပိုင်း လူတွေတက်စီငှားရင် ..အင်တာနက်ကရှာကြတာမို့ .. အင်တာနက်ထဲ .. ရှေ့ နေရာရဖို့ လိုပါတယ်..။
အဲဒါ ..အင်တာနက်ထဲ Google မှာနေရာရှေ့ ရောက်အောင် .. ကလစ်တချက်လုပ်ပေးလိုက်ကြပါဦး..။